Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Entsha Heyi! I-Kafe iyachuma eIndiya
Phakathi kobhubhani othe watshabalalisa ishishini lokuthengisa kwaye wakhokelela ekuvalweni kweemveliso ezininzi, Heyi! I-Kafe iye yavela ikhula. Isiselo esisekwe kwidijithali esekwe e-Indonesia sivule ngempumelelo iivenkile ezingama-60 e-Indonesia ukusukela oko yaqala ngoJuni ka-2020 kwaye kulindeleke ukuba yandise kwiivenkile ezingama-300 ukuphela kuka-2022.
Hayi! I-Kafe yingqondo ka-Edward Djaja, i-26, umseki we-Seven Retail, enezindlu ezininzi zeentengiso ezizayo ezifana ne-Golden Lamian, i-Indonesia ehamba phambili ye-Chinese Fast-Casual Chain eneevenkile ezingaphezu kwe-70 e-Indonesia ukususela ngo-2017.
“Apha Eyi! I-Kafe, i-metric yethu yeenkwenkwezi zasentla ikhula kwintengiso yevenkile enye, eyenza ukuba uphawu lufikelele kwi-stellar unit economics. Siyazingca ukuthi isicwangciso sethu sibe nesiphumo sexesha lentlawulo elingaphantsi kweenyanga ezili-12, nto leyo ebaluleke kakhulu kuthi ukuze sikhule ngokukhawuleza ngendlela ezinzileyo kule minyaka izayo,” utshilo u-Edward.
Ugxininiso lweLaser kuphuhliso lwemveliso kunye nokwaneliseka kwabathengi
Ukufezekisa le metric yenkwenkwezi yasentla, Heyi! I-Kafe isoloko ityala imali kwi-brand kunye nophuhliso lwemveliso entsha. Ngokusebenzisa inkqubo yophuhliso lwemveliso ephindaphindwayo neyenzululwazi, Heyi! Kafe uyakwazi ukuvavanya phezu 20 iikhonsepthi imveliso ngenyanga nganye. Oku kuye kwakhokelela ekubulaweni kwezinto ezikhethekileyo kunye nezithengiswa kakhulu kwimenyu, njenge-Hey-Shake Series!, equka i-Strawberry Heaven Hey-Shake kunye ne-Choco-Cashew Hey-Shake, phakathi kwabanye.
Ngoyilo olukhethekileyo kunye nokuma kwayo, Heyi! I-Kafe ijolise ngokucacileyo kulutsha kunye ne-hip millennials - abona bantu baninzi ngokobudala e-Indonesia - njengeyona marike iphambili. Ukubonelela ngoluhlu olubanzi lweziselo ezinoluhlu lwamaxabiso afikelelekayo, Heyi! I-Kafe ithandwa kakhulu phakathi kweminyaka eyi-millennials, ngaphezulu kwe-12,000 yeekomityi zeziselo ezithengiswa yonke imihla.
Imodeli yokukhanya kwe-asethi exhaswa bubuchwepheshe
Ukwandiswa ngokukhawuleza kwe-brand kuxhaswa yimodeli yokukhanya kwe-asethi. Uninzi lweendawo ezithengisayo zibandakanya ii-compact booths ezinciphisa inkcitho enkulu kwaye ziququzelele ukuhanjiswa kwenkonzo yeGrab & Go. Malunga ne-70% yeentengiso ze-brand ziquka ii-odolo zokuhanjiswa kwe-intanethi. Ibhrendi ikwabonelela ngemodeli yobambiswano, ngokufana nokuthandwa kwekhonkco levenkile eziluncedo eIndonesia.
Imodeli yeshishini lale nkampani itsale amehlo kubatyali-zimali abashishinayo, abafana noTrihill Capital, othe wayixhasa inkampani kumjikelo wembewu. Ngokugcina imodeli yokukhanya kwe-asethi, inkampani inethemba lokugxila kwizibonelelo ekwandiseni ixabiso lophawu kunye notyalo-mali olongezelelweyo kwitekhnoloji.
Izicwangciso ziyaqhubeka ukuphehlelela usetyenziso lweselfowuni yangaphakathi ngokuqala ngo-2022, ukuze babonelele abathengi babo benyanga abangama-350,000 ngamava obuqu kunye namava angenamthungo.